Baby – Page3– Healthy Life Journal
မွေးကင်းစကလေးငယ်တို့၏ နေမကောင်းဖြစ်နေသော အမူအရာများ
မွေးကင်းစကလေးငယ်နဲ့ လသားကလေးငယ်တွေက စကားမပြောတတ်သေးတာကြောင့် သူတို့နေမကောင်းဖြစ်နေသလား၊ မအီမသာဖြစ်နေသလားဆိုတာ သူတိုရဲ့ အမူအရာတွေကိုကြည့်ပြီး သိဖို့ကြိုးစားရပါမယ်။ သူတို့လေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာ အတွေ့ရများတဲ့ အမူအရာတွေကိုကြည့်ရင်း သူတို့ကို ပြုစုပေးသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ မိခင်နို့ချို စို့ချင်စိတ်မရှိခြင်း မွေးကင်းစကလေး နာမကျန်းမှုဖြစ်ရင် အသိသာဆုံး လက္ခဏာတစ်ရပ်က...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. လေးလအရွယ်သားလေး အူကျပြီး ဝေဒနာခံစားနေရပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြတော့ အသက်အရမ်းငယ်သေးကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ တခြားနည်းလမ်း ရှိပါဦးမလား အကြံပြုပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ C C(FB) A. အသက်က လေးလဆိုတော့...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကလေးတွေကို ဘယ်အရွယ်မှာ ဒိန်ချဉ် စတင်ကျွေးသင့်ပါသလဲ။ NuNu(FB) A. ကလေးအသက်ရှစ်လပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးကို ဒိန်ချဉ်စတိုက်လို့ ရပါပြီ။ ပြီးရင် နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို စကျွေးနိုင်ပါပြီ။ ဘယ်လိုကျွေးမလဲဆိုတော့ ညနေသုံးနာရီ...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကလေးက ၉ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်၊ ရေကျောက်ပေါက်နေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးသင့်ပါသလဲ။ (သန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာမှ မေးမြန်းသူတစ်ဦး) A. ရေကျောက်ရဲ့သဘောက ဖျားမယ်၊ ဖျားပြီး ရက်ပိုင်းအတိုင်း အရည်ကြည်ဖုလေးတွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ စပေါ်မယ်၊...